'कोरोना भएपछि मलाई राष्ट्रपति लगायतले हिम्मत दिनुभो, आम नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्छ' :: Setopati
विवेक राई काठमाडौं, साउन २०
गत शुक्रबार राति ९ बजे जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवलाई वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक मदनकुमार उपाध्यायको फोन आयो।
सुरुमा फोनको आवाज मज्जाले बुझिएन। त्यसपछि सांसद यादवले नै कुरा स्पष्ट भन्नुस् न डाक्टर साब, भनेर अनुरोध गरे। ‘तपाईंको कोरोना पोजेटिभ आएको छ, घरमा आइसोलेट भएर बस्नुस्,’ डा. उपाध्यायले जवाफमा भने।
शुक्रबार बिहान मात्र उनले नारायणी अस्पताल पुगेर कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब दिएका थिए। दुई दिनदेखि नै ज्वरो देखिएका उनलाई कतै रिपोर्ट पोजेटिभ आउने हो कि भन्ने मनमा चिसो पसिरहेको थियो। नभन्दै राति संक्रमण पुष्टि भएको खबर आयो।
त्यो सुनेर उनी छट्पटिए। मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाले। वीरगन्जमा ‘होम आइसोलेसन’मा बसिरहेका सांसद यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘रातिभरि सुत्न सकिनँ। छट्पटी मात्र भयो।’
उनले आफूलाई संक्रमण भएको कुरा केहीबेरमै फेसबुकमार्फत जानकारी गराए। ‘राहत वितरणदेखि अन्य कार्यको लागि धेरै गाउँमा डुलेको थिएँ। त्यसैले सूचना लुकाएर हुँदैन भन्ने लाग्यो। भेट्ने मान्छेले पनि परीक्षण गराओस् भन्ने सोचेर फेसबुकमा हालेँ,’ उनले भने।
त्यसपछि उनले संक्रमण भएको कुरा आफूसँगै सम्पर्कमा आएका तीन जना सांसदलाई जानकारी गराए। जिल्लाका सिडिओ र एसपीलाई पनि सुनाए।
संक्रमण भएपछि सांसद यादवलाई चिकित्सकहरूले अस्पताल जान पनि सुझाएका थिए। तर उनले आफूलाई समस्या नभएको भन्दै ‘होम आइसोलेसन’ मै बस्ने बताए। ‘मलाई त्यतिबेला एकदम सामान्य खोकी थियो। ज्वरो पनि ठिक भएको थियो। त्यसैले घरमै बस्नु ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो’ उनले भने।
संक्रमण भएपछि उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले फोन गरेर स्वास्थ्य लाभ दिएको सुनाए।
सांसद यादव भन्छन्, ‘कसरी टाउकोमा बज्रपात खस्दो रैछ भन्ने कुरा कोरोना भएपछि मात्र थाहा हुने रैछ। मैले त्योबेला धेरैबाट हिम्मत पाएँ। मैले जस्तै अरूले पनि हिम्मत पाउनुपर्छ।’
उनले धेरै मानिसले यस्तो बेला हौसला नपाएको भन्दै राज्यले सबैलाई हिम्मत दिनुपर्ने बताए। आफूले भोगेपछि झन् यस्तो कुरा बढी थाहा हुने उनी बताउँछन्। ‘अन्य सर्वसाधरण पनि संक्रमित हुनुहुन्छ तर राज्यले उनीहरू अस्पतालमा कुन अवस्थामा छन्, खाना कस्तो छ भनेर कहिले हेरेको छैन’ उनले भने, ‘यस्तो बेला सबैभन्दा ठूलो भनेकै आत्मबल हुँदो रैछ। मेरो साथमा राज्य छ भन्ने सबैलाई महशुस गराउनुपर्छ।’
उनले आफैं संक्रमित भएपछि झन् धेरै गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी भान हुने बताए। पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधित्व गरेका यादव भन्छन्, ‘एकदम दुर्भाग्य भयो। अहिले वीरगन्जको यस्तो हविगत छ तर म आफैं संक्रमित छु। मैले संक्रमित भएपछि पनि वीरगन्जमा विकसित भइरहेको घातक स्थितिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ।’
उनले वीरगन्जमा कोरोना समुदायमा फैलिएको भन्दै तत्काल अस्पताल लगायत आवश्यक पूर्वाधार सरकारले यथाशिघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने जोड दिए। उनले अहिले पनि आफूले वीरगन्जको वस्तुस्थितिबारे फोनबाटै जानकारी लिइरहेको जनाए।
‘अहिले पनि चिकित्सकहरूबाट यहाँको स्थितिबारे नियमित जानकारी लिइरहेको छु। संक्रमण समुदायमा फैलिएको देखिन्छ। अस्पताल छैन। दैनिक संक्रमित बढिरहेको छन्। यस्तै हो भन्ने स्थिति घातक हुनसक्छ,’ उनले भने।
सांसद यादव कोरोना पुष्टि भएदेखि नै परिवारबाट छुटिएर बसेका छन्। उनले आफू बिहानै उठ्ने र योगा गर्ने गरेको सुनाए। त्यसपछि छतमा साइक्लिङ गर्न पनि सुरु गरेको बताए।
‘मेरो छुट्टै बाथरुम छ। छुट्टै हलमा बसेको छु। केही खान मन लाग्यो भने परिवारलाई फोन गर्छु। त्यसपछि उहाँहरूले ढोकामा ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। आफूले खाएको भाँडा पनि आफैं सफा गर्छु,’ उनले भने।
उनले त्यसबाहेक किताब पढ्ने, फिल्म हेर्ने र साथीहरूसँग कुरा गरेर दैनिकी बिताइरहेको सुनाए। साथै जिल्लाको वस्तुस्थिति बारे पनि जानकारी लिइरहेको बताए। उनले परिवारका अन्य सदस्यमा भने संक्रमण नदेखिएको जनाए।
सांसद यादवलाई संक्रमण कसरी भयो भने एकीन भएको छैन। उनी गत बुधबार एक कार्यक्रमको लागि भनेर केही सांसदसहित सिन्धुली गएका थिए। त्यहीँ दिन उनी बर्दिवास पुगे।
त्यहाँ पुगेर उनीहरू होटलमा बसे। होटलमा बस्दा राति सांसद यादवलाई ज्वरो आएको महशुस भयो। तर त्यहाँ ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर थिएन। रात पनि परेकाले उनले प्यारासिटामोल मगाएर खाए। त्यसपछि उनले सन्चो भएको महशुस गरे।
भोलिपल्ट उनी बर्दिवासबाट वीरगन्जका लागि छुटे। एकजना पिएसओ र चालकसहित उनी बिहीबार राति वीरगन्ज घर पुगे। त्यसपछि उनले नारायणी अस्पतालका चिकित्सक मदनकुमार उपाध्यायलाई फोन गरे र आफूलाई भएको समस्या वेलिविस्तार लगाए। त्यो रात डा. उपाध्यायले एउटा एन्टिबायोटिक लिन सुझाए।
कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएकाले सांसद यादव घर पुगेकै दिनदेखि परिवारबाट अलग्गै बसे। त्यसपछि शुक्रबार बिहानै नारायणी अस्पताल पुगेर स्वाब दिएका थिए। पछि नतिजा आउँदा उनीसहित पिएसओ र चालकलाई पनि संक्रमण पुष्टि भयो।
अहिले सांसद यादव वीरगन्जस्थित आफ्नै घरमा ‘होम आइसोलेसन’ मा बसिरहेका छन्। उनले १० दिनपछि दोस्रो परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छन्। उनले आफूमा ठूलो आत्माविश्वास रहेको भन्दै छिट्टै निको हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बाँकेमा थप एक संक्रमित पुरुषको मृत्यु
बारबर्दियामा पाँच दिनका लागि दिन निषेधाज्ञा
कोरोना संक्रमित गर्भवतीले पोखरामा पहिलोपटक जन्माइन् बच्चा
बैंकिङ कसुरमा १२ करोड जरिवाना र तीन वर्ष कैद तोकिएकी अभियुक्त बनेपाबाट पक्राउ
कोरोना भाइरस समुदायमा गएको भन्न नमिल्ने सरकारको दावी